Digniino hor leh oo loo jeediyey dhinacyada siyaasadda Soomaaliya - Awdinle Online
Digniino hor leh oo loo jeediyey dhinacyada siyaasadda Soomaaliya
Odayaasha dhaqanka magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay xisadda siyasadeed ee ka dhex aloolsan mucaaradka iyo dowladda oo gaartay meel aad sareysa.
Odayaasha ayaa soo jeediyey in xaalada la dejiyo xilli shalay Muqdisho ay ka dhaceen banaanbaxyo iyo dagaal khasaare geystay oo dhexmaray ciidanka amniga, shacab iyo ciidan militeri ah oo taageersan midowga musharixinta oo aad u diidan hanaanka ay heshiiskii doorashada u fulineyso dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo.
Ururrada bulshada rayidka, aqoonyahnada iyo odayaasha dhaqanka ayaa Ra’iisul wasaare Rooble ka dalbaday in arintaan uu soo faro-geliyo uuna kala diro guddiga doorashada ee muranku uu ka taaganyahay, iyagoo u soo jeediyey inuu soo magacaabo guddiyo heshiis lagu yahay.
Murankii ugu xooganaa ayaa xiligaan ka taagan arrimaha doorashada Soomalaiya, waqti xileedka hey’adaha dowladda waxaa ka harsan muddo aad u kooban, waxayna arrintaasi keentay walwal soo wajahay sii jiritaanka dowladnimada Soomaaliya.
Khilaafka ka taagan dooarashada dalka ee u dhaxeeya dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah iyo mucaaradka ayaa cirka isku sii shareeraya, mana jiro wax dadaal ah oo muuqda, si looga gudbo tabashada ka taagan doorashada.
Previous articleMidowga Musharixiinta oo si kulul uga hadlay Hub la siinayo dowladda Madaxweyne farmaajo
Next articleUganda oo War kasoo saartay Go’aan uu Soomaaliya ka qaatay Mareykanka